DH Lawrence. New gore rekuzvarwa kwake. 7 nhetembo | Zvazvino Zvinyorwa
David Herbert RichardsLawrence, anozivikanwa saD. H, Lawrence, akazvarwa pazuva rakaita nhasi kubva muna 1885 muEastwood, England. Akanyora zvinyorwa, nyaya pfupi, nhetembo, mitambo, zvinyorwa, mabhuku ekufambisa, shanduro, uye kushoropodza kwemabhuku Uye yaitariswa kubva pa mutadzi (imwe yemanoveli ake akadaidzwa sekudaro) kune anokanganisa mukati mabatirwo erudo nebonde iyo yaakapa mubasa rake.
Mazita ake ane mukurumbira ari Anoda Mukadzi waChatterley, Vakadzi murudo o Vanakomana nevanodanana. Zvake nhetembo vanozivikanwa zvishoma. Saka panoenda imwe kusarudzwa ye7 yavo yekurangarira ichi chiitiko chitsva chekuzvarwa kwake.
2 Chido chakafa
4 Ndinoda kusangana nemukadzi
5 Musango mukutapwa
6 Umhutu unoziva
Hauna basa here mudiwa wangu? Akandibvunza zvine shungu.
Ndakatambanudzira girazi ndokuti:
Ndokumbira utungamire iyo mibvunzo kune iyo inganetseke!
Ndokumbira kuti uite zvikumbiro zvako kuhofisi yepamusoro!
Mune zvese nyaya dzekukosha kwepfungwa,
enda wakananga kune chiremera chepamusoro!
Ndakadaro ndichimutambidza girazi riya.
Uye mumusoro mangu ndingadai ndakaityora,
asi akazoona kuratidzwa kwake.
Akafarira, maziso ake akamutarisa, achishamisika,
apo ini ndaitiza.
Chido chingave chakafa
uye zvakadaro murume anogona kuva
nzvimbo inoungana mvura nezuva,
hameno kuti zvinopidigura marwadzo
semuti munguva yechando.
Kufanana neiyo yepamusoro
Uye slim ndiro
Ndakasimudza ndakananga kwauri
Ndiro yangu yekutsvoda
Uye kuburikidza nekuzorora
Uye kumiromo yangu
Uye kune yangu silhouette
Muchena uye mutete zvakaerera
Ndakamira pamberi pearitari
Uye ndakachema kumusoro kudenga
Kuti iwe upfugame
Uye unwe, o Ishe.
Ah inwa muviri wangu
Kuti pamwe ndiri
Kunge waini yakanyarara
Uye Mhedziso Chakavanzika.
Ndinoda kusangana nemukadzi
kuti yakanga yakaita semurazvo mutsvuku muchoto
kupenya mushure mekunyanyisa kweiyo zuva
Zvekuti ndigone kuswedera padhuze naye
murunyararo rwegoridhe rwekuvira kwezuva
uye ndinofarira parutivi rwake
pasina chisungo chekuedza kumuda nekuda kwekuremekedza,
kana kumuziva mupfungwa.
Pasina kutambura kutonhora pandinotaura naye.
Kana sango richigara mukutapwa
Varume vese nhapwa.
Nhapwa dzechiitiko chekutapa.
uye kunyangwe kana vakaregeredza
akanakisa haagoni kubereka
Iyo huru keji yekumba kwedu
kuuraya bonde mumurume; nyore kwe
Chido chakamonyaniswa, chakatsauka uye chakamonyaniswa.
Uye nehuipi hwakaipa
muhudiki vanovenga, kutevedzera nekuchema.
Bonde mamiriro enyasha.
Mune keji hazvigone kuitika.
Ipapo iwe unofanirwa kuiparadza.
Umhutu hunonaka kwazvo,
kuti kukosha kwayo kubvutwa.
Nekuti shure kwezvose
anongotora mutambo wake,
usaise ropa rangu mubhangi.
Ndiri mutongi weruzhinji apo ini ndoda iro remahara zuva iro randinowana mairi
uye aristocrat pandinovenga varidzi,
Mumurume wese ndinoda zuva
pandinozviona pakati petsitsi dzake,
chakajeka, pasina kutya, kunyange chidiki.
Asi pandinoona iwo akachena bvudzi varume vakabudirira
inonhuwa uye inopenga, haina kana zuva,
sevaranda vasina hunhu vebudiriro,
Saka ini ndakanyanya kukunda, uye ini ndoda kubata guillotine.
Uye pandinoona vashandi
dzakachenuruka uye dzakaumbuka kunge zvipembenene, kurira
Uye kurarama se inda nemari shoma
uye asingatarisiri kumusoro,
ipapo ndinoda Tibheriyo,
kuti vanhu vaive nemusoro mumwe chete
Ini ndinonzwa kuti kana varume varasikirwa nezuva
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » DH Lawrence. New gore rekuzvarwa kwake. 7 nhetembo